Top 10 Easy Video Joiners lagu bedelan karo
Easy video joiner waa software free in loo abuuray si loo caawiyo dadka isticmaala si ay ugu biiraan, ku milmaan iyo isu geeyo kala duwan video clips si ay u sameeyaan filim hal. Ajiibay qaabab video ka mid ah MP4, FLV, AVI, MPEG, wmv, ASF, DivX, iyo MOV kuwo kale. Sida xaqiiqadu, waa qalab aad u fiican oo isu keenaya badan video clips si loo abuuro filim dheer oo wuxuu ku raaxaysan aan joogsi madadaalada. Users ku dari kartaa tiro aan xad lahayn oo ah video files liiska ku biiro, si fudud iyada oo loo marayo dirida iyo dib-u-diyaarin clips video ah si isku xig xiga la doonayo. Iyadoo qasabno oo kaliya dhowr mouse, users abuuri karaan dheer iyo madadaalo video clips. Video lagu dari karaa si qaabab playable on iPods, iPads, iPhone, iyo PSPs. Waxaa kale oo u oggolaanaysa in tayada hagaajin karo ee wax soo saarka la isticmaalayo presets anfacaya oo sidoo kale loo dardar downloads ilaa 200% isticmaalaya farsamada CUDA & DXVA oo halkan loo yareeyo waqtiga ugu gabbado oo ay ilaa 50%. Guud ahaan waa ay fududahay in la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan ku haboon oo bilaash ah oo kaliya joiner video ee suuqa. Qaar kale ayaa laga wada hadlaa iyo weliba.
Freemake Video Converter waa la heli karaa si xor ah video ku biiro qalab in la si fudud u soo bixi karaa oo ay isticmaalaan shakhsiyaadka xiiso. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in videos loo rogo oo ah qaabab kale duwan oo ay ku jiraan avi, wmv, iyo mp4s. Waxaa noocyada kale oo ay taageerayaan Freemake Video Converter ka mid ah 3gp, soosaaray mp3, gubi DVD, waad dooxi doontaa DVD Blu-ray iyo qaabab. Tani waxay u ogolaaneysaa ah videos abuuray isticmaalaya software-ka la ciyaari in qalabka kala duwan oo ay ku jiraan iPhone, iPod, iPad, PSP, iyo Madaxweyne Siilaanyo. Users sidoo kale abuuri kartaa image duubey oo arki Cajalado.
Tani waa video ku biiro qalab la heli karo si loogu isticmaalo software hawlgalka kala duwan oo ay ku jiraan Windows, Mac OS X, Linux, iyo BSD. MKVToolnix leedahay qalab u saamaxaya kuwa isticmaala si ay u abuuraan, bedesho oo aan baadho video files. Wixii Matroska, waxa aanu kaliya dhab ahaan waxa OGMtools qabto qaabab OGM. Intaa waxaa dheer, software ugu dambeeyay dhisaa ay awoodaan si ay u abuuraan WebM waafaqsaneyn Files.
Heli Windows iyo Mac OS X, Boilsoft Video Joiner waa video biirtay qalab aad u awood badan loo isticmaalo ee ku biiray video of qaabab kala duwan oo ay ku jiraan WMA, MP4, MP4A, AVI, MPEG, Mpg, VOB, dhexena / RMVB, 3GP, ASF, wmv, MKV iyo FLV kuwo kale. Waxaa si fudud u saamaxaya kuwa isticmaala si ay u abuuraan file aan kala joogsi lahayn hal badan oo madadaalo u gaar ah. Qalab wuxuu bixiyaa Direct ah hab Stream iyo hab Encode si ay u midowdo videos si hufan, oo xawaare sare.
4. Andy ee FLV Joiner
Andy ee FLV Joiner waa mid fudud aad u Flash Video flv ah. File joiner ugu horayn loogu talagalay nidaamka qalliinka daaqadaha. Waa freeware ah oo aan u baahnayn rikoodh video files. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waayi maayo tayo leh waa tayada waxaa la soo bandhigay. Intaa waxaa dheer, software xamili karo files VBR aan la kulma dhibaatooyin u hagaagsan audio. Waxa kale oo ay taageertaa FLV la FLV1, VP6F iyo sidoo kale H264. Waa in la ogaadaa in marka files biiray ma yihiin qaab la mid ah, xallinta, fps, iyo guryaha guud, ka dibna faylka ku biiray hirgalinayaa qaab faylka ugu horeysay ee.
Mediajoin waxaa si xor ah u qaybiyeen software u saamaxaya in la isu geeyo clips Video / Audio galay file hal. Barnaamijka waa mid fudud oo aan lahayn sharraxaad iyo khibradda loo baahan yahay in la isu geeyo kala duwan video clips ka mid ah soo galay. Ma la socon karaa in Mpg, MP3, regelingen iyo files MPEG. Intaa waxaa dheer, waxaa saamaxaya kuwa isticmaala in la isu geeyo files qoraalka iyo qoraalo.
Tani waa freeware ah Windows-ku-saleysan u ogolaanaya tafatirka degdegga ah ee AVI (DivX, Xvid, iyo MPEG 4), MPEG 1 iyo 2 video files. Free Video Dub u ogolaanaya dadka isticmaala si ay ugu biiraan qaybo video yar oo tirtirto qaybaha rabin ka video files oo aan haysan si ay u dib-u-encode. Taas oo muujinaysa in waayi maayo tayada asalka ah waxaa la soo maray. Sida xaqiiqadu, Free Video Dub ku lug leh sameecadda ah oo degdeg ah video tafatirka.
SolveigMM AVI Trimmer waa aalad tafatirka yar oo si sahlan loo isticmaali video u saamaxaya kuwa isticmaala inay ku soo biiraan kala duwan video files mid. Waxa ay u ogolaataa tafatirka ee AVI qaab file videos aan khasaaro ah oo tayo leh. Muhiimaddu waxaa weeye, ma video / audio nabaad loo soo maray. Waxaa wax laga xumaado, waxaa la ogsoon yahay in ay dhib u hagaagsan kadib markii tafatirka ee videos la dhamaystiro. Waxa ay taageertaa AVI gudbiyo eegin size ama video / content audio.
Video Edit Master waa free video qalab tafatirka daaqadaha ku salaysan u badan oo ay ku jiraan qaabab video divx, xvid iyo qaabab mpeg file video oo aan laga badinin tayada asalka video files. Qalab, sida kale video ku biiro qalab ka wada hadleen ayaa u fudud ah si ay u isticmaalaan interface iyo saamaxaya kuwa isticmaala si ay ugu biiraan kala duwan video clips yar galay hal, waaweyn video clip. Users ma u baahan tahay in khubaro ah si ay u isticmaalaan qalab ay ku biiraan video, geeddi-socodka waa wax fudud oo halkan ka noqonayaan arday khubaro ka heli doontaa aalad fududahay in la isticmaalo.
Tani waa video tafatirka multi-functional in kaliya ma ahan ogolaan biirida video clips, laakiin sidoo kale u ogolaataa diinta warbaahinta iyo jeexitaanka ee DVD. Isticmaalka qalab, dadka isticmaala ku biiri kartaa video clips ka mid ah qaabab kala duwan si ay u sameeyaan hal waaweyn oo isku formatted file video ah oo halkan ka abuuraan khibrad daawadee weyn.
Software gacan-jabis waa il furan, multi-xidhnayn, qalab video-transcoding u ogolaanaya diinta ka mid ah warbaahinta dhijitaalka ah mid ka mid ah qaab kale, iyo in habka iyaga diinta. Kartida ay functional kordhiyo si video ku biiro awoodaha ku dheehan badan yaryar files video la isugu keenay karo si ay u sameeyaan hal file video ah. Waxa ay taageertaa badan oo qaabab file video for diinta halka ay ka soo video files ku kooban MPEG-4, H.264, ama qaababka Theora.
Guud ahaan, waxaa jira kala duwan video ku biiro ama qalab loo isticmaali karaa meel ka mid ah Easy video joiner. Soocin ee software this horrayn waa tayada wax soo saarka iyo muddada diinta sida ay u muuqdaan in ay la wadaagaan inta badan oo ka mid ah muuqaalada, aan loo baahnayn in la xuso aqlabiyad, haddii dhan ma software waxa ay kala yihiin freeware. Sida xaqiiqadu, users waa in ay leeyihiin Raalli ahaanshaha isku dayaya mid kasta oo si joogto ah u isticmaalaya kuwa si ay ugu helaan saaxiibtinimo, fududahay in la isticmaalo iyo dammaanad tayo sare leh
The dhammaan ayuu ka sarreeyaa waa ka bixiyeyaasha kale la qaababka ugu muhiimsan, halka Wondershare uu leeyahay kale oo la mid ah la shaqayn awood badan sida biiro / dhimo / dalagga / jar / shaandheyn iyo wixii la mid ah. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Top 10 Easy Video Joiner lagu bedelan karo